Blaogin'ny orinasa: Fanontaniana folo voalohany avy amin'ny orinasa | Martech Zone
Alarobia, Jolay 18, 2007 Talata, May 3, 2016 Douglas Karr
Raha misy zavatra iray manintona anao hiverina amin'ny zava-misy dia mivory amin'ireo orinasa isam-paritra hiresaka momba ny fanaovana bilaogy sy ny media sosialy izany.
Ny vintana dia, raha mamaky an'ity ianao, dia azonao tsara ny mitoraka bilaogy, ny media sosialy, ny fanoratam-boky ara-tsosialy, ny fanatsarana ny motera fikarohana, sns. Ianao no maningana!
Ivelan'ny 'blogoshere', i Etazonia orinasa dia mbola mitolona amin'ny fitadiavana anaran-tsehatra ary mametraka pejy web. Tena izy ireo! Betsaka no mbola mijery ny Classifieds, Yellow Yellow ary Direct Mail mba hamoahana ilay teny. Raha manam-bola ianao, mety hifindra amin'ny Radio na TV mihitsy aza. Izy ireo dia mpampita vaovao mora, sa tsy izany? Mametraka mari-pamantarana, toerana, doka fotsiny… ary miandry ny olona hahita azy. No Analytics, pejin-pejy, mpitsidika tsy manam-paharoa, laharana, permalinks, ping, trackbacks, RSS, PPC, milina fikarohana, laharana, fahefana, fametrahana - manantena fotsiny ary mivavaka fa misy mihaino, mijery na mijery ny orinasanao.
Ity tranonkala ity dia tsy mora ho an'ny orinasa mahazatra. Raha tsy mino ahy ianao dia mijanona amin'ny faritra iray Konferansa Web ho an'ny vao manomboka, Fihaonamben'ny varotra isam-paritra na hetsika Chamber of Commerce. Raha tena te-hanao fanamby amin'ny tenanao ianao, dia araraoty ny fotoana hitenenanao. Mpanokatra maso!
Fanontaniana folo momba ny fitorahana bilaogy avy amin'ny orinasa:
Inona ny fanaovana bilaogy?
Nahoana isika no tokony hanao bilaogy?
Inona no maha samy hafa ny fanaovana bilaogy sy ny tranonkala?
Ohatrinona ny vidin'ity?
Impiry no tokony hanaovantsika izany?
Tokony hampiantrano ny bilaoginay amin'ny tranokalanay ve izahay sa hampiasa vahaolana nampiantranoina?
Ary ahoana ny amin'ireo hevitra ratsy?
Afaka manao bilaogy mihoatra ny iray ve ny olona?
Ahoana no hifehezana ny marika?
Voahosotra tao amin'ny orinasa aho ary nahagaga ahy vao nahare ireo fanontaniana ireo. Tsy nahalala momba ny fitorahana bilaogy ny rehetra? Ny mpivarotra rehetra dia tsy tafiditra tao anaty haino aman-jery sosialy toa ahy?
Ireto ny valinteniko:
Inona ny fanaovana bilaogy?Fohy fotsiny ny bilaogy amin'ny weblog, gazety an-tserasera. Matetika, ny bilaogy dia misy lahatsoratra izay voasokajy ao anaty sokajy ary avoaka matetika. Ny lahatsoratra tsirairay dia mirona hanana adiresy tranonkala tokana hahitanao azy. Ny paositra tsirairay dia mazàna manana fomba fanehoan-kevitra hanomezana valiny avy amin'ny mpamaky. Ny bilaogy dia navoaka tamin'ny alàlan'ny HTML (ilay tranonkala) ary RSS manome sakafo.
Nahoana isika no tokony hanao bilaogy?Ny bilaogy koa dia manana teknolojia miavaka miavaka izay mampiasa teknolojia motera fikarohana sy fifandraisana amin'ireo bilaogera hafa. Ireo bilaogera malaza dia mazàna raisina ho toy ny mpitarika eritreritra ao amin'ny orinasany - manampy amin'ny fampiroboroboana ny asany na ny orinasany. Mangarahara sy mifampiresaka ny bilaogy - manampy ny orinasa hamorona fifandraisana amin'ireo mpanjifany sy ny vinan'izy ireo.
Inona no maha samy hafa ny fanaovana bilaogy sy ny tranonkala?Tiako ny mampitaha tranokala amin'ny famantarana eo ivelan'ny fivarotanao ary ny bilaoginao no fifandraisan-tanana rehefa mandeha eo am-baravarana ilay mpiaro. Zava-dehibe ny tranokala 'Brochure' - mametraka ny vokatrao, serivisinao, ny tantaran'ny orinasa ianao ary mamaly ny fampahalalana rehetra mety ho tadiavin'ny olona momba ny orinasanao. Ny bilaogy no tena mampahafantatra anao ny toetranao ao ambadiky ny orinasanao. Ny bilaogy dia tokony hampiasaina hampianarana, hifandraisana, hamaliana ny tsikera, handrisihana ny hafanam-po ary hanohana ny fahitan'ny orinasanao. Matetika izy io dia somary tsy misy fomba ofisialy firy, tsy voalamina tsara, ary manome fahitana manokana - fa tsy ny marketing fotsiny.
Inona no maha samy hafa ny fanaovana bilaogy sy ny tranonkala?Angamba ny zavatra lehibe indrindra amin'ny bilaogy dia ny hoe ilay bilaogera no mitondra ny hafatra fa tsy ilay mpitsidika. Na izany aza, ny mpitsidika dia afaka mamaly izany. Ny forum Internet dia ahafahan'ny tsirairay manomboka ny resaka. Haiko ny mahita ny tanjon'izy roa samy hafa. RNH, ny forum dia tsy manolo bilaogy na ny mifamadika amin'izany - fa nahita fahombiazana tamin'ny fampiharana azy roa aho.
Ohatrinona ny vidin'ity?Ahoana no maimaim-poana feo? Misy rindranasa fitorahana bilaogy taonina maro eto, izay sady mpampiantrano no rindrambaiko azonao entina amin'ny bilaoginao manokana. Raha lehibe ny mpihaino anao, mety hahita olana amin'ny fantsom-pifandraisana sasany ianao izay mety mitaky anao hividy fonosana fampiantranoana tsara kokoa - saingy tsy dia fahita firy izany. paikady fitorahana bilaogy ary ampifandraiso amin'ny tranokalan'ny brochure na ny vokatrao, na izany aza! Afaka mifampiarahaba tsara izy roa!
Impiry no tokony hanaovantsika izany?Ny fifandimbiasana dia tsy zava-dehibe toy ny tsy fitoviana. Ny olona sasany manontany hoe impiry aho no miasa amin'ny bilaogiko, toa tsy mahazatra ahy izany. Matetika aho no manao lahatsoratra 2 isan'andro… ny iray amin'ny hariva ary ny iray kosa dia famoahana miorim-potoana (voasoratra) izay mamoaka mandritra ny andro. Isaky ny hariva sy maraina, matetika aho dia mandany adiny 2 ka hatramin'ny 3 eo am-panaovana ny bilaogiko ivelan'ny asako mahazatra. Nahita bilaogy mahafinaritra aho izay mandefa isaky ny minitra vitsy ary ny hafa izay mandefa indray mandeha isan-kerinandro. Fantaro fotsiny fa rehefa mametraka ny andrasana amin'ny lahatsoratra mahazatra ianao fa tokony hihazona izany fanantenana izany, raha tsy izany dia ho very ny mpamaky anao.
Tokony hampiantrano ny bilaoginay amin'ny tranokalanay ve izahay sa hampiasa vahaolana nampiantranoina?Raha mpamaky ahy taloha ianao dia ho fantatrao fa tiako manokana ny mampiantrano ny bilaogiko manokana noho ny fahalalahana omeny ahy amin'ny fanovana endrika, manampy endrika hafa, manova ny kaody ny tenako, sns. Hatramin'ny nanoratana ireo lahatsoratra ireo, na izany aza, ny vahaolana nampiantranoina dia tena nanandratra ny bara. Afaka miasa miaraka amin'ny vahaolana nampiantrano anao ianao, manana ny anaranao manokana, manamboatra ny lohahevitrao ary manampy fitaovana sy fiasa toa anao koa raha toa ka mampiantrano anao manokana aho. Bilaogera fa namindra azy io haingana tamin'ny vahaolana nampiantranoina WordPress. Te hanana 'ny fanjakako' aho ary hampanjifa bebe kokoa ilay tranonkala. Tsy hanakivy olona aho - na dia orinasa iray aza - tsy hampiasa vahaolana nampiantranoina toy izany Vox, Typepad, Bilaogera or WordPress vao manomboka sy manandrana.
Raha tena matotra ny orinasanao dia jereo tsara ireo fonosana bilaogy 2.0 toa izany famintinana!
Ny Compendium Software dia natombok'ireo namako roa namako, Chris Baggott sy Ali Sales, ary ny fivoaran'ny bilaogy manaraka.
Ary ahoana ny amin'ireo hevitra ratsy?Ny olona sasany mino fa tsy afaka manana bilaogy marina ianao raha tsy misy olona sy olon-drehetra afaka maneho hevitra momba izany - na dia diso na manompa aza. Mampihomehy tsotra izao. Azonao atao ny miala amin'ny fanehoan-kevitra rehetra - fa very ny atiny novokarin'ny mpampiasa sarobidy! Ny olona maneho hevitra ao amin'ny bilaoginao dia manampy fampahalalana, loharano ary torohevitra - manampy ny lanjan'izy ireo sy ny atiny.Tsarovy: Ny motera fikarohana dia tia ny atiny. Mahafinaritra ny atiny ateraky ny mpampiasa satria tsy mandany vola akory ianao fa manome bebe kokoa ny mpihaino anao! Raha tokony tsy misy hevitra dia ajanony fotsiny ny fanehoan-kevitrao ary apetraho amina toerana misy azy ny politikam-pitsarana mahafinaritra. Ny politikanao dia mety ho fohy sy tsotra, Raha ratsy laza ianao - tsy mandefa ny hevitrao aho! Ny fanehoan-kevitra manimba amin'ny fomba mahomby dia afaka manampy ny resaka ary mampiseho amin'ny mpamaky anao hoe karazana orinasa manao ahoana ianao. Mankasitraka ny rehetra aho fa ny mahatsikaiky indrindra na ny SPAM. Rehefa mamafa ny hevitro aho dia matetika mandefa mailaka amin'ilay olona ary milaza azy ireo ny antony.
Afaka manao bilaogy mihoatra ny iray ve ny olona?Izany mihitsy! Ny fananana sokajy sy bilaogera ao anatin'ireo sokajy tsirairay ireo dia mahafinaritra. Fa maninona no apetrakao amin'ny olona iray ny tsindry rehetra? Manana orinasa manana talenta iray manontolo ianao - apetraho ampiasaina. Heveriko fa ho gaga ianao amin'ny hoe iza ireo bilaogera matanjaka indrindra sy malaza indrindra (Vonona ny hanaiky aho fa tsy ho olon-kafa ara-barotra ianao!)
Ahoana no hifehezana ny marika?Bilaogy 80,000,000 eto amin'izao tontolo izao misy olona ana hetsiny isan-kerinandro… maninona? Mibilaogy momba anao ny olona. Mamorona a Fanairana Google ho an'ny orinasanao na ny orinasanao ary mety ho hitanao fa miresaka momba anao ny olona. Ny fanontaniana dia hoe tianao ve azy ireo hifehezana ny marikao na ianao hifehezana ny marikao! ny fitorahana bilaogy dia manome mangarahara izay tsy ankasitrahan'ny orinasa maro. Nilaza izahay fa te-hangarahara, te hamporisika ny mangarahara, saingy matahotra ny ho faty amin'izany izahay. Zavatra tsy maintsy resin'ny orinasanao tsotra izao. Na eo aza ny marina, ny mpanjifanao sy ny vinavinanao dia efa miaiky fa tsy tonga lafatra ianao. Hanao fahadisoana ianao. Hanao fahadisoana amin'ny bilaoginao koa ianao. Ny fifandraisan'ny fifampitokisana izay apetrakao amin'ny mpanjifanao sy ny vinavinanao dia handresy ny slip-ups azonao.
Tags: fitorahana bilaogyfanontaniana bilaogytontolom-bolonganamarikaorinasa bilaogybilaogy orinasabilaogy orinasa ho an'ny dummiesohatrinona ny vidin'ny fanaovana bilaogyimpiry isika no tokony hanao bilaogyfanehoan-kevitra ratsytokony hampiantrano ny bilaogintsika ve isika?inona no atao hoe bilaogyinona ny mahasamihafa ny bilaogy sy ny tranokalanahoana isika no tokony hanao bilaogy
19 Jul 2007 amin'ny 2:19 PM
Tsy dia mora araka ny nieritreretako azy ny fanaovana bilaogy, manana fanontaniako lil aho, avy any Venezoelà aho, ny fanaovana bilaogy eto dia tsy dia fantatra amin'ny anarana hoe yahoo na Google… fa tokony ho tsena tsara ao anatin'ny roa taona, noho izany manomboka amin'ny bilaogy tsotra aho izao http://bajaloads.com (lolz Ao amin'ny lisitry ny tendrony aho), te-hanitatra ny marika BajaLoads
(Baja = ambany amin'ny Espaniôla)… manao bilaogy vaovao amin'ny teny Espaniôla, ny rahavaviko dia hitantana bilaogy iray hafa, ny zanako vavy iray hafa, ary ny namako iray hafa… amin'ny Espaniôla daholo izy ireo… ary miaraka amin'izay aho dia ampahafantaro azy ireo eny amin'ny anjerimanontolo, andalana… na aiza na aiza tsy misy spam, izao no fanontaniako: hahazo filaharana SEO tsara kokoa ve aho raha mametraka fanehoan-kevitra toy izao amin'ny bilaogy tiako? (satria tsy maintsy omeko ny url-ko ary aseho amin'ny anarako)
19 Jul 2007 amin'ny 2:30 PM
lahatsoratra tena tsara. talanjona foana aho noho ny tsy fahampian'ny fahazoana hevi-bahoaka. Rehefa milomano amin'ny mpanelanelana ianao dia mieritreritra ny hahalala izany rehetra izany. ary eny, mety ho mampivadi-po be ho an'ireo olona tsy mahalala firy momba ny Internet, indrindra ny fanaovana bilaogy. na izany aza, famakafakana mahasoa amin'ny orinasa sy bilaogy.
19 Jul 2007 amin'ny 10:02 PM
Tsy azoko jerena ny hevitro, fa maninona no ratsy ??
19 Jul 2007 amin'ny 10:34 PM
Toa zavatra buggy miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra… miasa eo aho… hmmm.
19 Jul 2007 amin'ny 11:17 PM
koa aza manahy, fa ny hanangana ny "Corporation" ho ahy any Venezoela fotsiny no nolazaiko, satria tsy dia fantatra eto ambony ireo bilaogy 😛
Nieritreritra ny hamorona sub domains toy ny:
Izy rehetra dia tantanan'ny rahavavaviko, ny sakaizako ary sakaizako iray (tsy tokony handoa izany amiko izy ireo satria hahazo tombony amin'ny US $ ary handoa ao Ven-bolivares).
ny fanontaniana dia izao, - Moa ve mahazo toerana SEO tsara kokoa aho raha maneho hevitra amin'ireo bilaogy ekena toa izao? (satria tsy maintsy mizara ny url-ko)
Izaho koa dia eo am-pelatanana hanoro anao :-D, na dia rehefa naka torohevitra nomenao an'ireo bilaogera hafa aza aho,
fihavanana bro 😀